Candy Crush dia lalao novokarin'ny King studio. Nanjary iray amin'ireo fisehoan-javatra lehibe indrindra teo amin'ireo mpampiasa izy tato anatin'ny taona vitsivitsy. Iray amin'ireo lalao nalain'ny mpampiasa indrindra tamin'ny Android, izay manohy mandresy olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao ankehitriny.
Amin'ity sokajy ity dia ho hitanao izay rehetra tianao ho fantatra momba ny Candy Crush. Avy amin'ny vaovao farany momba ity lalao malaza ity, amin'ny fikafika mandroso ao aminy na amin'ny fahalianana mahaliana indrindra momba izany. Raha tianao ity lalao ity dia tsy tokony halainao ity sokajy ity amin'ny Androidsis.
Swipe ny rantsan-tananao mba hahatonga ny andalana sakana maro hanjavona ao amin'ny Cube Blast Saga
Cube Blast Saga dia piozila vaovao, tsy avy amin'ny KING, izay ahitan'ny 3D ny ampy hanodinana izany ...
Olona sivy tapitrisa no milalao Candy Crush mandritra ny telo na adiny enina isan'andro
Candy Crush dia iray amin'ireo lalao finday finday tranainy indrindra eny an-tsena. Na eo aza ny taona nisy azy io, ...
Crush the Castle dia "Angry Birds" feno tanteraka izay manimba trano mimanda
Manorotoro ny Castle: Siege Master dia «Angry Birds» iray manontolo izay tsy maintsy handravanay trano mimanda an-jatony ...
Candy hafa avy amin'ny King miaraka amin'ny Candy Crush Friends Saga
King dia nitifitra ny tenany tamin'ny fahombiazany tamin'ny lalao finday niaraka tamin'ny Candy Crush Saga. Miverena indray izao ...
Avy amin'ny mpamorona ny Candy Crush Saga dia avy ny Diamond Diaries Saga: Rohy miantra mba hamoronana firavaka!
Diamond Diaries Saga no vaovao indrindra amin'ny KING, mpamorona ilay Candy Crush Saga lehibe. Tonga hanohy ny ...
Ny lalao toa ny PUBG Mobile dia mahatonga ny filalaovana finday hanomboka hita amin'ny fomba hafa. Y…
Zava-misy mahafinaritra momba ny fikororohana vatomamy mety tsy fantatrao
Candy Crush dia iray amin'ireo lalao fanta-daza indrindra izay azontsika jerena amin'ny telefaona Android mandritra ny fotoana maharitra. Ny lalao…
Angry Birds Blast no vatolampy Candy Crush noforonin'i Rovio
Rovio dia maniry bebe kokoa ary nahita lalao samihafa izahay izay nanandrana nanalavitra ny Angry Birds, na dia misy valiny aza angamba ...
Manorotoro ny fahavalonao! RTS vaovao misy kalitao be izy ary tena barbariana
Tsy fantatro hoe firy ny lalao azoko andramana mandritra ny herinandro, saingy misy maro amin'izy ireo eo amin'ireo ...
Mametraka an'i Candy Crush Saga ho mpanapaka tanteraka ny lalao video match-3 ary saika ny lalao rehetra ...
Candy Crush Jelly Saga, vatomamy bebe kokoa ho an'ny olona rehetra miaraka amin'ny Mpanjaka vaovao
ny Manuel Ramirez hace 6 taona .
Tamin'ity taona lasa ity dia nanana ny iray amin'ny vaovaon'ny taona isika raha nahazo ny vola 5.900 miliara ilay Activision mahery ...